Burmese Poetry Foundation: April 2010
မြို့ကြီးရဲ့သွေးတွေ အကုန်စုပ်ယူမယ့် ကြမ်းပိုး
သူမက ကျွန်တော့်ကို လွမ်းပြီး မငိုဘူး(တစ်နှစ်ကျော်ပြီ)။
ညစာစားဖို့ အကြောင်းကြားတဲ့ သံကြိုးစာ ဝင်လာတယ်။
ဗာဒံပင်က သူချုပ်တည်းထားခဲ့သမျှကို တစ်ရွက်ပြီး တစ်ရွက် ခြွေချလို့။
မရေးရသေးတဲ့ ဝတ္ထုထဲက ဇာတ်ကောင်တွေ စကားပြောနေကြ။
‘ ဒါဆို . . . လူကြီးမင်းက ကျွန်တော့်အဖေပေါ့၊ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်’ တဲ့။
ကျွန်တော့်ဖောင်တိန်ထဲမှာ အကောင်းစား ဘရိတ်တွေ တပ်ဆင်ထားပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ မုန်တိုင်းကို လေညင်းဖြစ်အောင် ခွဲစိတ်အောင်မြင်ခဲ့ကြပြီ။
အစီရင်ခံစာ တစ်စောင်မှာ ဖတ်ရတယ်
အဝေးမှာ ကြယ်တွေ အော်နေကြရဲ့။
ကျွန်တော့် လည်ချောင်းတွေ ယားလာတယ်မိတ်ဆွေ
ဆင်တစ်ကောင်ကို ဘယ်မြွေမှ ကုန်အောင် မျိုနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့။
ကျွန်တော့်ကို ပြောပြနေတာလား အာဖရိက
ဧပြီလ ပြီးရင် ဧပြီလ မလာဘူး
မစ္စတာဂျွန် (ဝမ်းနည်းပါတယ်) မင်းကို ငါ မသိဘူး။
ကျွန်တော် ငတ်မွတ်ခဲ့ဖူးပုံကို အရသာရှိရှိ ပြန်ပြောပြနိုင်ပါပြီ
ဒိုင်ယာရီထဲမှာ အချက်ပေး ခေါင်းလောင်းတွေ မြည်ကြ
ငွေစက္ကူတွေဆီက အနံ့ တထောင်းထောင်း ရနေပေါ့။
၁၉၉၀ ခုနှစ်က ဟဖြဲထားတဲ့ ပါးစပ်ကြီးတွေဆီ အလည်တစ်ခေါက်သွားဦးမယ်။
စာချုပ်ထဲမှာ လက်မှတ်ထိုး မရှိ
ကျွန်တော့်မှာ ငွေစက္ကူ မရှိ
စီးကရက်တစ်လိပ်ကို မီးညှိပြီး ငြင်းပယ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်မိပြန်ပေါ့။
ငြိမ်သက်ခြင်းဟာ ဇာတ်ညွှန်းနှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်တည်း သရုပ်ဆောင်ရာ ရောက်သတဲ့။
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဖခင်အတွက် သင်္ဘောတစ်စီး ထွက်ခွာခဲ့ပါပြီ
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ သင်္ဘောတစ်စီးအတွက် ရေငုပ်သမားတွေ ထွက်ခွာခဲ့ပါပြီ
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ရေငုပ်သမားတွေ အတွက် လင်းပိုင်များ ထွက်ခွာခဲ့ပါပြီ
ရောမမြို့ကြီး နှင်းတွေထဲမှာ ငြိမ်သက်တိတ်နေချိန်
ကျွန်တော်ဟာ တယောတစ်လက် ထိုးနေခဲ့တယ်။ ။
သရဖူ ၂၀၀၃၊ မတ်လ
ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ ၂၀၀၅၊ နိုဝင်ဘာ
တစ်ပိုဒ်တစ်ပိုဒ်တစ်စ တစ်ကြောင်းတစ်လုံး တစ်ပါဒအတွက်
ရယ်သံမောမော သက်တံနဲ့ အိပ်စက်ခြင်းကို အေးချမ်းစွာ
တောင်းဆိုနေတဲ့ အခန်း။ ကြွေသားအရောင် အေးစက်ခြင်းနံရံ
ကော်ဖီအသွေး နွေးထွေးမှု ပြတင်းပေါက်ပန်းချီကား
ခရု၊ ဂုံး၊ ကမာစတဲ့ အခွံပိတ် သတ္တဗေဒ ဆိုင်ရာကြွက်သား
အပန်းဖြေပန်းခြံထဲ အသည်းထိတ်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသံ ငြိမ့်ကနဲတွေ
အရင်ဘဝ (သို့) ဘဝအဆက်ဆက် ကွဲသွားသော
အချင်းချင်း လက်ငင်းရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအစများရဲ့
ပုံကြီးချဲ့ အနီးကပ်ရှုခင်း၊ အဝေးက ဖြည်းဖြည်းလာနေရတဲ့ အသံ
တစ်ခါတစ်ရံ ရံဖန်ရံခါ အကြိမ်ကြိမ်များ ပုံမှန်နီးနီး
စိတ်ဝင်တစား အကျင့်ကပါ လုပ်လေ့ရှိ အလေ့အထများရဲ့
ဂရုတစိုက် ပွက်လောရိုက်မှု ပဲ့တင်သံတိုးတိုး
ခွဲစိတ်ခန်းထဲ အချိန်နှင့်အမျှ အရောက်ရှုသံ
အခိုးအငွေ့တစ်ခုခု အတွင်းသားအရောင်ရဲ့ သီးခြားကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကရနံ့
မြက်တွေပေါ် အင်အားကြီး တွန်းလှဲသွားလာ
စပါးကြီးမြွေ တစ်ကောင်လောက် တွားသွားခွန်အား
အေးအေးဆေးဆေး တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် အသံနဲ့
တွက်ချက်ထားသော အခုအခံ အရံအတားအဆီး
ရေးသူ လူဆန်း မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
likeapoem writer rolling floating,
for the sake of piece,astanza,aline,aword,
they try to love
room peacefully demanding gay laughter, rainbow,
and sleep. Porcelain cool walls
coffee colour warmth window picture
snails, clams, oysters, shelled biological muscles
gush of wind that sends paper kites up into the sky
sudden noises coming out of heart beats in the park
presently searching for one another body parts
enlarged close-up scenes, sounds coming slowly from afar
listen from the mountain ranges
sometimes, occasionally, frequently, almost regularly
interestingly, being accustomed to, used to, habits
carefully, uproarious, faint echoes,
looking as if atamirror, breaks into and out
into the operating theatre all the time coming breaths
particular personal odour of internal color inside some vapour
on the grass pushing down to move with great force
slithering power likeaboa constrictor’s
withapeaceful quiet sound
calculated obstacles, barriers
to somewhere safe from these
for the sake ofapiece,astanza,
a line,aword,
From : written by Lu Hsan
ကျန်းမာသော နွေဥတုနှင့် သူ၏ချစ်သူများ
အို -- ကြွေရွက်
အို -- မိုက်သော ကြွေရွက်ရှုပ်
မူလထက်ပင် တွေစွာ ဝေစွာ
အို -- ပုစ္ဆာပြုသူ
မိုးဝေ၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၁၉၈၀ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
အချစ်ဆိုတာ မူးဝေပြီး ဒုက္ခချစ်ဟန်ဆောင်လို့
ထီးတစ်စင်းအောက် မိုးရေထဲမှာ ရွာမဆုံးတော့
မျက်ဝန်းပြာပြာ နှင်းထုဖြင့် ပိတ်ဆိုင်းနေပြီလား
သိုးဆောင်းဘာသာမှ ပြန်ဆိုသော ဆောင်းပါး
ပြန်လည်ကိုးကားလျက် သွားစို့၊ သွားကြစို့
တောလက် နွေရာသီရဲ့ မြေပိုင်ရှင် နံနက်ခင်း
တော်စတွိုင်းပြတိုက် ပလာဇာ(တနင်္ဂနွေနေ့ ပိတ်သည်)
မျက်လုံးထဲက ထွက်ကျလာ မျက်ရည်လားကွယ်
ကျန်းမာ သန်စွမ်းသော ဝမ်းနည်းခြင်းများဖြင့်…
လီယိုတော်စတွိုင်းဟာ အရပ်မြင့်မြင့် ရုပ်ချောချော
ဒေါသကြီးတဲ့ ဝက်ဝံတစ်ကောင်ရဲ့ လက်သည်းစူးနစ်
သူ့ဝတ္ထုကို အထပ်ထပ်ပြင်ကာ ဖျက်ကာ ရေးရှာပါရဲ့
ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ သူဟာ သုံးရက်ကြာ
ဘယ်သူနဲ့မှ စကားမပြောပဲ လေ့ကျင့်
ဒါပေမယ့် ပြဇာတ်ထဲမှာ စန္ဒရားတစ်လုံးမှ မပါ
လူသုံးယောက်ပါဝင် မုန်တိုင်းနှင့် ဒီလှိုင်းကြား
ဒဏ်ရာ အနာတရ သေသေကြေကြေ ကူးခတ်ကြ
တီကောင်တွေ ခေါက်ဆွဲတွေ လုံးထွေး
စက်ဘီးတစ်စီးနှင့် ခါးထောက်ပြီးရပ်နေ (၁၈၅၂)
လက်ပိုက်ပြီးရပ်လျက် နှုတ်ခမ်းမွေးနှင့် (မုတ်ဆိတ်မွေး မရှိသေး)
အင်နာ ဗရွန်စကီး ခန်းမဆောင်
သူ့ရင်ခွင်ထဲ ပျော့ပြောင်းသွယ်လျ မိန်းမပျိုတစ်ယောက်
ပုံစာ..(ချစ်သူကို အလိုမလိုက်ဘူး ရင်ခွင်မှာထား ဓါးနဲ့ထိုးမယ်)
အန္တရာယ် တွေ့ကြုံစဉ် ဓါတ်ပုံ
ထိုစဉ် . . . တစ်စုံတစ်ယောက် ပြောရှာရဲ့
သနားကြင်နာဖွယ်ရာ ကောင်းပါသတဲ့ ။ ။
ပိတောက်ပွင့်သစ် အမှတ်(၂၄) မေလ၊ ၂၀၀၉ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
နွားတစ်ကောင်ရဲ့ကျောကုန်းပေါ်က မှက် ကောက်ရိုးဟာ သားသတ်ရုံမှာ သွေး
သံရဲရဲ နံရိုး တပိုင်းနဲ့ အူအသဲ တစ်စုံ ပိုက်ဆံရှင်းပေးပြီး မီးပွိုင့်မှာ အဖွားကြီးတယောက်
လမ်းကူးတာ စိတ်မရှည်စွာ စောင့်နေရတယ် မောင်းတံတွေ ဝါနီဖြူအရောင် ကျားကျား ပေါ့ပ်
ဂီတလို့ပြောတယ် စွဲမက်ကြတယ် ရူးမူး လို့သုံးနှုန်းတယ် အသုံးအနှုန်းတွေဟာ စံပြ ဖြစ်ဖို့
လိုတယ် ခင်ဗျားမျက်မှန်တင်ထားတဲ့အောက်က စက္ကူပုံးထဲမှာ မြွေ ခြေရာ အလင်းတန်း သူတော်စင်
ပြုံးလျက် ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့် ပလပ်စတစ်အိတ်နဲ့ လေစုပ် ထုတ်ပိုးထားရာ အငွေ့ပျံဆဲ ဆုတ်ယုတ်ဆဲ
၀.၁၂ ခန့်မှ ၁၄.၈၉ ခန့်အထိ ယူနစ်ကို သင့်စိတ်ကြိုက်ယူလိုက်ပေါ့ လွဲသွားလည်း ဒိထက်လွဲစရာ
မရှိတော့ပါ ကမ္ဘာကြီးဟာ ဘာမှမထူးတော့ပါ သင်ခေါ်လည်း ထူးမယ့်သူမရှိတော့ပါ ဝမ်းနည်းကြောင်း
စာလွှာများ ပလူပျံ အဆိပ်ပြေပျောက်စေရန်ဟု မှောက်ထားသော ဝမ်းပြားလှေအား ထေးဖာ စွပ်ကြောင်း
တလျှောက် အရှိုးရာများ အစင်းလိုက် အစင်းလိုက် သဲသောင်မှာ မဲမှောင်နေတုန်း ပဲလှောင်ကြမလား
နှုတ်ကဆီမန်းမန်းသလို တိုးတိုးရွတ်ကြည့် ဒီဘဝနဲ့ ဒီအလုပ်ပဲလို့ တခါထဲ ငုတ်ရိုက်ထားတာကို ပဟတ္တိ
ခေါ်တာပဲ ဖိုးသူတော်နဲ့ တောင်ဝှေးပါ မောင်တောတွင် ဖက်က်စ် နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီ ငါတောင်းတာ
အသား မင်းပေးတာအရိုး လှေကားတွေ တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်း တွဲလောင်းဆင့်ချိတ်ထားတယ် တိမ်ထဲ
၂၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၀ ဘန်ကောက်စံတော်ချိန် ၇း၅၁ နာရီ